Sendika Tolon’ny Mpiasa (T.M.)
MIATRIKA OLANA NY MPIASA
ROA KARAZANA NY OLANA ATREHINTSIKA:
1- Ny olana mivantana maningotra ny Mpiasa dia ny fahavoazana mihatra amin’ny fiainan’ny Mpiasa. Ny karama sy ny asa hatao: mihena, miato, foana ampahany na manontolo.
2- Ny olana tsy mivantana kanefa mitarika miantraika amin'ny Mpiasa dia ny orinasa sy ny sampam-pihariana mikatso (misy karazana asa mihena, miato na foana mihitsy).
Olana samy mitera-pahavoazana amin'ny Mpiasa ireo.
Ny voalohany ilana famonjena maika avy hatrany. Vonjy voina io. Miaraka amin’izany ny fandaminana vonjimaika eo am-pamahana olana.
Ny faharoa kosa mila vahana tanteraka vao tena tafarina iry voalohany.
NY TENA FOTOTRA MAHATONGA NY ORINASA MIKATSO :
Io no mila foanana.
Rehefa zahana fototra ny olana mahazo antsika dia hita ny rangory fototry ny afo.
- Ny sakana – hasomparana ato anatiny (Brickaville, Fatihita sy fanapoahana tetezana samihafa) mampikatso ny fifamoivoizana akora, angovo, entana aondrana;
- Ny famotehana ny fifandraisana ivelany (ny AirMad somparan'ireo mpitantana teo aloha hanafenana ny asa maloto tao);
- Ny fampihorohoroana mpandraharaha (Vonoana, faneren’ny Goverinera handoa vola amin’ny Provansa mizakatena na handoa hetra in-droa raha tsy izany, …) ;
- Ny ara-bola (banky s.n.s.).
* Ny olana fototra dia ny kandida resy tamin’ny fifidianana mikiry tsy maintsy ho filoha ihany.
Izay handraiki-tampisaka ilay fihariana fampangoronan-karena ny forongony no kendreny (tera-tany sy vahiny sasany eto sy any ivelany). Io dia fihariana mampiasa ny fahefam-panjakana handrobana fananan’olona sy harem-pirenena, hihinanana ny orinasa amin’ny tian-kano tsy tian-kano sy tsolotra (fambaboana orinasa sy antok’asam-panjakana tahaka ny famonoam-balala, alalana samihafa atao kiantrano antrano, tetezana mitsikafona, fanaovana tsimatimanota amin’ny hetra sy haba, …). Sintoniny amin’ny tsolotra ny volan’ny orinasa ka tsy misy anjaran’ny Mpiasa, hanatsarana ny toe-piainany.
Fitondra-mitanila no ataony amin’ny samy orinasa. Ataony tsy maty manota ny Mpampiasa mandika lalàna sy manandevo Mpiasa rehefa mandoa “ ekolazy ” aminy.
Ny paikany ankehitriny dia kendritohana handavoana am-pandrika ny fitondrana vaovao. Te-hiseho fa mahatana lazon’ady amin’ny fanjakana-faritra izy (radio nentin’ny alzeriana, haromotana amin’i Fianarantsoa, tetezan’Ifatihita). Kendreny hovery an-javony ny resaka fifidianana ka izay mahery an’ady ifanandrinan-tafika no hanjaka.
Ny fihariana malalaka anaty fifaninanana madio sy ara-pandrosoana kokoa ary manaja lalàna sosialy no fofoiny tsy hipoitra.
* Aoka hiavaka tsara tsy hifangaro ny hevitra :
- Ny fihetsiketsehana (lazain’ny Mpampiasa sasany fa “ grevy ” ) dia nanaovana fandaminam-potoana. Raorao tanatin’ny orinasa izay tsy nahavita nifampiraharaha no naterany raha nisy.
- Ny mpanararaotra no tsy manaiky dinika ifampiraharahana ka mahatonga fifanenjanana fa mila vaniny hamintinana ny isan’ny Mpiasa (compression) sy ny karamany.
* Marihina fa :
- Misy Mpampiasa mamatsy vola an-dRatsiraka. Misy manohana goverinera mpanao barazy. Mbola mihevitra (diso) ireny fa hahazo vahana kokoa amin’ny fiverenany ka mamolaka hampandady ny fitondrana vaovao.
- Manafay sy manao valin’ady tsy mivaky amin’ny Mpiasa izy ireo.
- Mitetika hampifototra ny Mpiasa amin-dRavalomanana.
- Misy koa anefa ny Mpampiasa misahotaka fotsiny ka ny mifatratra amin’ny Mpiasa no heveriny ho vahaolana.
* Tsara hazava amin’ny rehetra fa :
Petra-bola sy rakitra ho an’ny Orinasa raha malala-tsaina sy marisika hifarimbona ny Mpampiasa amin’izao fanarenana izao. Sehatra madio hampavitrika kokoa ny fiharian’ny Orinasa manara-dalàna, mahasahy mifaninana amin’ny lafivalo ary mahasahy miantehitra amin’ny Mpiasa no atsangantsika.
Izay hahatafarina sy hampisondrotra ny toe-piainan’ny Mpiasa no tanjona kendrena amin’ny farany.
Mila vonjy voina mahomby izany ; mila famahana ilay tena sakana fototra ary mila ezaka manokana fanarenana haingana rehefa voavaha ny olana fototra. Tsy maintsy arahina fandaminana vonjimaika ireo rehetra ireo tsy hihombo ny fahavoazana.
Iarahana mamaha ny tena fototr’olana. Misy “ plan social ” ifampiraharahana kosa hitsinjovana ny Mpiasa ho vonjy voina sy ho fandrisihana amin’ny fanarenana.
- Tanteraka ny vonjy voina raha mahita làlam-bola vonjimaika ho an’ny Mpiasa sy fanampiana amin’ny zavatra ilainy.
- Voavaha ny olana fototra raha voatana ary marin-toerana ny asa, izany hoe tafaverina amin’ny laoniny ny orinasa.
- Tafarina ny Orinasa raha voatana ny Mpiasa efa zatra tato raha misy fandrisihana manokana ny Mpiasa hampitombo haingana ny vokatra sady hampahery ny Orinasa amin’ny fifaninanana.
Ny kendrena amin’ny vonjy voina dia mba hanana fidiram-bola ny Mpiasa (tsy roahina), misy horaisina ary mahazo fanampiana amin’ny zavatra ilaina mandra-pivahan’ny olana.
1° - Aoka hamarinina sy haloa vola ny kaontin’ora niasana (sao misy récupération tsy voaloa).
2° - Raha :
- voamarina ara-panjakana ny fahasahiranan’ny Orinasa,
- voazavan’ny Mpampiasa ny ara-bola fikirakira (trésorerie),
- voara-maso fa mandeha amin’ny fanomezam-bola vonjy voina hoan’ny Mpiasa tokoa izany.
Dia vonona hiaraka hangataka amin’ny Governemanta ny Sendika sy ny Delege mba hanamorana an’ireto :
- ny hetra sy haba ary latsakemboka samihafa aloan’ny Orinasa ;
- alàlana hivaro-bokatra tsy voaondrana, akora na ambinambim-bokatra eto an-toerana – “ consommation locale ” - (stocks, coupons, sous-produits, emballages, …) ;
- alàlana hanao asa ho an’ny eto an-toerana (prestation de service) : ohatra sérigraphie, teinture, …
3° - famatsiana amin’ny zavatra ilaina : atao maika ny fandinihana hamelomana “ économat ” an’ny orinasa sy “ coopérative ” ampian’ny orinasa (fifarimbonan’ny Mpiasa hiatrika ny fahasahiranana) : étude, réalisation, financement.
FANDAMINANA VONJIMAIKA MIANDRY NY VAHAOLANA
Ny kendrentsika amin’ny fandaminana vonjimaika dia mba hovoafefy tsy hanitatra ankoatr’izay tena tsy azo anoharana ny fahavoazana eo am-piandrasana ny tena vahaolana.
Izao no hatao raha hisy ny “ Chômage technique ” :
- Mila antony tekinika mazava azo hamarinina tsara ;
- Lazaina mazava ny fe-potoana haharetany ;
- Ifampidinihana raha mbola azo atao ny mifandimby tsy miasa, ny mampihena ny ora iasana, ny mifandamina amin’ny Usine hafa anatin’ny “ Groupe ”, …
- Tsy maintsy mahazo antoka ny Mpiasa fa hotafaverina hiasa, tsy hisy fandroahana an-kolaka.
- Mandritra ny 1 – 2 herinandro voalohany : atao récupération congé.
- Hatramin’ny 1 volana : Karazana indemnité.
- Tanterahina ny “ Vonjy voina ” voalaza etsy ambony.
Izao no hatao raha hisy ny “ Compression ” :
- Aoka mihitsy tsy hafangaro amin’ny “ départ volontaire ”, famporisihana Mpiasa hiala an-tsitrapo.
- Raha “ départ volontaire ” dia :
o Sitrapon’ny Mpampiasa ny mamporisika ny Mpiasa hanao izany.
o Ny Mpiasa te-hiasa. Koa rariny raha misy tambiny hoan’ny Mpiasa miala an-tsitrapo, ankoatran’ny zo ara-dalàna fanome ny Mpiasa roahina.
o Manao fifampiraharahana faobe momba ny tamby ho an’izay hiala an-tsitrapo.
- Raha “ compression ” dia :
o Mandre mialoha tsara ary afaka manome hevitra ny Mpiasa sy Sendika ary delege ;
o Omena ny antony mazava azo hamarinina tsara ;
o Vita tenierana tsara ny amin’ireo Mpiasa voatery halana. Tandremana tsy ho fanilihana olona an-kolaka ;
o Manao fifampiraharahana faobe mba hisy fanampiana ara-tsosialy ankoatran’ny zo ara-dalàna fanome ny Mpiasa roahina.
Ny resaka fanakatonana “ Usine ” kosa dia sorohina amin’ny fomba rehetra.
Atao anatin’ny “ Groupe ” ny famahana an’io.
FAMAHANA OLANA SY FANARENANA
Ny vahaolana dia : afaka ny sakana mampikatso ny Orinasa ka tafaverina ny asa.
Ny kendrentsika amin’ny fanarenana dia, ny hahafahan’ny Mpiasa miasa hampiarina haingana ny Orinasa ary manatsara miaraka amin’izany ny toe-piainany.
Ireto no azo izorana raha voahaja ny falalahana ara-tSendika ary mandeha tsy misy raorao ny dinika sy fifampiraharahan’ny Mpiasa sy Mpampiasa ato am-piasana.
Mifarimbona ny Mpiasa, ny Mpampiasa sy Sendika manaitra sy mampandray andraikitra ny mpiaraka aminy any amin’ny Faritany samihafa mba hahafoana ny barazy, ny famotehana tetezana, ny fampihorohoroana, ny fandrahonana ara-ketra ataon’ny goverinera, ny olana ara-banky.
Ny atao amin’izany dia : Antso Gazety, Radio, TV ataon’ny Mpiasa, ny T.M. sy ny sendika samihafa, ny KMSB amin’ny faritra rehetra ka ny Mpampiasa koa manao tahaka izany isaky ny faritra. Ireto no tiana hotanteraka :
- arovan’ny fitondrana ny zava-tsaro-pady ho an’ny Orinasa mpamokatra (fifamoivoizana, angovo) ;
- enjehina sy faizina hahafoana azy ny barazy sy famotehana tetezana ampanaovin’ny goverinera ;
- enjehina sy faizina hahafoana azy ny fampihorohoroana Mpandraharaha sy Mpiasa mpitatitra ;
- tsy manaiky hankatò ny fakam-bola miharo fandrahonana ataon’ny goverineran’ny provansa ;
- mitaky fanamorana amin’ny Banky samihafa.
Antananarivo, 02 avril 02